Nzira nhatu dzekushanda neChiedza pakombuta yako Linux Vakapindwa muropa
Parizvino hazvisi zvakajairwa kuve nemakomputa ane mashoma zviwanikwa, makomputa kubva makore gumi apfuura atove ne10 Gb yegondohwe kana zvimwe uye ma processor avo anokurumidza uye ese ane 1-bit chikuva. Izvi hazvireve kuti madhesiki akareruka anosiiwa, kure nawo. Kunze kwemidziyo inoida chaizvo, vashandisi vazhinji vanoisa uye / kana kushandisa mwenje tafura kuti zviwane izvo zviwanikwa zvemamwe mabasa.
Imwe yematafura akareruka uye akanaka kwazvo zvakafanana Kuvhenekerwa. Kujekeserwa izere desktop kuti kusiyana nemamwe madhesiki akaita sePlasma kana Gnome, inochengetedza runako pasina kuwedzera zviwanikwa kushandiswa. Tinogona kuisa iyi desktop pane chero komputa, asi pazasi isu tinokuudza nzira nhatu dzekuwana iri desktop uye nekuchengetedza zvinotevera zviwanikwa.
Iyo yakapusa uye inonyanya kufarirwa nzira ndeyekuisa iyo desktop kubva kune kwedu kwatinoda kugovera. Vaviri mu Ubuntu senge muDebian, Fedora uye Arch Linux vane Chiedza mumabhuku avo epamutemo uye isu tinogona kuiisa kuburikidza nesoftware maneja yekugovera.
Iwo akakosha mapoinzi eiyi nzira ndeyekuti hatidi kudzima komputa yedu, kana isu tatova neLinux, uye chii tinogona kuchinja desktop kana tisingade Enlightenment. Pfungwa isina kunaka neiyi nzira ndeyekuti marongero nedesktop hazvina kunyatsogadziriswa uye isu tichafanirwa kuita optimization neruoko.
Nzira inotevera ndeyokushandisa Bodhi Linux. Bodhi Linux iri kugovera kunoshandisa forogo yeChiedza 17, imwe yedzidziso dzakatsiga dzeChiedza chekujekesa. Kugoverwa uku kunoshandisa Ubuntu sehwaro uye pamusoro payo kunoisa iyo Enlightenment desktop. Pfungwa yakanaka ndeyekuti Bodhi Linux inotipa yakakwana yakazara ruzivo rweiyi desktop inofambiswa neiyo Ubuntu chikuva. Iyo poindi isina kunaka ndiyo chaiyo yekupedzisira. Uye isu hatina shanduro dzeFedora kana Arch Linux yeBodhi Linux. Chinhu chingave chinonetsa kune avo vari kutsvaga kugoverwa kweGnu / Linux kwakafanana neFedora kana Arch Linux.
Nzira yekupedzisira iri kuburikidza neElive kugovera. Elive kugoverwa kwakazvarwa kuitira kuti ushande pamakomputa ane zviwanikwa zvisingawanzo, kunyanya pamabhuku. Elive yakavakirwa paDebian asi ine yakasimba kugadzirisa iyo inoita kuti zvitiomere isu kusiyanisa mugove wevabereki.
Pfungwa isina kunaka yeElive ndeyekuti yakavakirwa paDebian uye software yayo, kunyangwe yakagadzikana kwazvo, yachembera. Pfungwa yakanaka ndeyekuti isu tine yakakura Enlightenment optimization iyo mashoma ma desktops ane uye ayo achazoshanda zvakakwana pane chero komputa, inosanganisira 32-bit michina.
Kujekerwa idesktop rakakura, kwete rekushandisa zviwanikwa chete asiwo nezvikonzero zvekushongedza. Y zviri kushamisika kuti hapana zvepamutemo zvinwiwa neyakareruka tafura. Chero zvazvingaitika, nenzira nhatu idzi tinogona kunakidzwa nekujekerwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » Nzira nhatu dzekushanda neChiedza pane komputa yako
Ndinoda LinuxAdictos kuti ipe hunyanzvi maonero ekuti Chiedza hachina kushandiswa se "Flavour" kana Optimized Desktop Nzvimbo kune vazhinji venharaunda yeLinux, ndiko kuti, kana isati yaitwa seizvi, panofanirwa kuve nekumanikidza zvikonzero. Ndinoda kuti iwe uite chinyorwa zvishoma kubva pane zvakajairwa, uchijekesa izvo zvishoma zvinodikanwa kuti kugoverwa kuve nekuisa kujekesa kuti unakirwe nezvose zvirimo, izvo zvinoda Chiedza zvinoda kusangana kuti zvionekwe se "Flavour" kana Desktop Zvakatipoteredza uye ita bvunzo dzekuita pakati peshanduro dzinoshanda kwazvo dzeChiedza mukusiyana neiyo ichangoburwa yakaburitswa, ichiisa panguva imwechete iwo mashoma maapplication ayo akagadzirirwa kugoverwa kweChiedza apo uchichengeta kumisikidza uye kushandiswa kweavo vanovimba ne python ku zvishoma.
Saka, kungave mune yakachena vhezheni yeDebian kana Arch semuenzaniso, ratidza kana Chiedza chichigona uye pasi pemamiriro api ezvinhu kana kugadzirisa kana kumisikidza Chiedza chinogona kuzadzikisa kuve sarudzo yemakomputa ane 64-bit processor asi ane mashoma RAM kubva 1GB ~ 4GB; Vashandisi veGNU / Linux munyika dzine tekinoroji kumashure vanovatenda sezvo vasina zano, nekuti nguva pfupi yadarika zvinonzwisisika kuti nharaunda iri kuenda kumidziyo ine hunyanzvi, sekukwikwidzana neindasitiri yakazvimirira iyo yakanganwa uye isingatsigire michina kuita kwakaderera uye zvakaderera zviwanikwa, kune linux kugoverwa uko kune, semuenzaniso, XFCE seDesktop Nharaunda nemhando yese yezvibodzwa zvakagadzirirwa XFCE ichiti kushandisa zviwanikwa asi kana yaiswa chete pakupera kweiyo system mutoro (ndiko kuti, yatove pane desktop yakagadzirira kushanda) iri kutotora zvakapoteredza 450MB, fungidzira kuti nekombuta ine 1GB chete ye RAM uye iwe unofanirwa kusefa internet.
Ini ndanga ndiri fan weChiedza, asi ndizvozvo chaizvo, hapana kugoverwa kunopa mapakeji kunoita kuti kumisikidza kugadziriswe, kune zviputi, hazvitsigire kana kutomisikidza zvisarudzo zvekutanga kana zvekutanga izvo Chiedza chinoda mune yaro README faira kuti unakirwe. kushanda kwaro kwese pasina matambudziko (senge injini yemabara semuenzaniso), uye kutenderera internet vazhinji vanoramba vachitaura nezvekuchinja kuenda kuWayland, uye vachizviona sevatariri vemahwindo vachiramba vakanamatira kune yekare X11 isina nhau dzekuti inoshanda here shanduko, saizvozvo, vazhinji vanoramba vachirumbidza Kujekeserwa asi ini handioni kukomba kwakanyanya nezvazvo pachikamu chekuparadzirwa kweLinux kuchipa sechisarudzo (hapana kana nharaunda hombe pakati pekuparadzirwa kweLinux imwe neimwe inofunga zvakanyanya nezvekugadzira nharaunda shanduro. ), kune rimwe divi vazhinji vevanoirumbidza vanotaura nezvevhezheni dzisati dzatsigira (zvizere kana zvishoma) Wayland nevamwe vanozviti vanokanganisa Kujekesa ment nekuti sezvo iri kuitiswa Wayland iri kudya barbaric huwandu hwezviwanikwa, vamwe vanoti kusvika ku800MB kungova pa desktop desktop.
Nekudaro, kana iwe uchikwanisa kubuda mukunyora kwako kuita kamwechete kuti ujekese nenzira yehunyanzvi nzira dzekugona, zvakanakira, zvakaipira kuve neyakagadziriswa uye yakagadziridzwa kugoverwa neKujekerwa kushandisa dhata rekongiri (chokwadi), nharaunda yakatenderedza GNU / Linux haungakwanise kungokutenda chete asi nyanya kutarisisa kwete chete kuChiedza asiwo nezvako zvinyorwa, Kwaziso uye kumbundira.
Ini ndinodawo ino desktop desktop, iyo kunyangwe iri yakanaka kwazvo isingarasikirwe kureruka. Ndakaishandisa kubva kumahofisi epamutemo eakasiyana ma distros, akaunganidzwawo kubva ku git, uye ini ndatoedza Bodhi nekumwe kufungira, uye kunzwa kwekubata Enlightenment kunofadza kwazvo. Ndiri kushamisika kuti hakuna hukuru hukuru hunosanganisira iyo seimwe yeavhenekeri avo uye ndinonyatsoda kuti mumwe atore nhanho kupfuura chero chinhu nekuti vazhinji vashandisi vanoshandisa nharaunda yedesktop inouya yakaenzana nekuparadzirwa, uye panogona kunge paine zvakawanda yedesktop nharaunda asi iwo asingauye seye default desktop nharaunda anowanzoenda akanaka zvisingaonekwe.
BitWarden: yakavhurika sosi muchinjika-chikuva password maneja